နေအပြည့်ကြတ်ခြင်းဖြစ်စဉ် (၂၀၁၇) ၏ ဓာတ်ပုံစုစည်းမှု – Curiosity
Home /နေအပြည့်ကြတ်ခြင်းဖြစ်စဉ် (၂၀၁၇) ၏ ဓာတ်ပုံစုစည်းမှု
မနေ့ည မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၁၂ နာရီက အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ နေအပြည့်ကြတ်ခြင်း ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားတာကို အားလုံးလဲ သိပြီး ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန်မှာ ဖြစ်သွားတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေ မမြင်လိုက်ရပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် သူတို့ထဲကမှ အလွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ ဓာတ်ပုံများကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဒီပုံတွေဟာ အစိုးရ၊ နာဆာ အစရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းများက ရိုက်ကူးထားတာမဟုတ်ပဲ သာမန်ဝါသနာရှင်များမှ ရိုက်ကူးထားကာ သူတို့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်တွေဖြစ်တဲ့ Facebook, Instagram, Twitter နဲ့ Flickr တို့မှာ အသီးသီးတင်ထားကြတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ရှုစားကြပါ။
သူတို့ထဲကမှ အချို့ဟာလဲ Flickr မှာ သီးသန့်တင်ထားကြပါတယ်။
Happy to be home for the eclipse and view it with my kids and my parents! Weren’t those the little crescent shadows fabulous? 🌙🌙🌙 . . #eclipse #eclipseshadows #eclipse2017
TAGS: astronomy earth eclipse latest Planetary Science science space tharhtetaung